Canonical uye nzira yayo kune IPO, honzeri yezvakaitika kune ramangwana reUbuntu | Linux Vakapindwa muropa
Canonical uye nzira yayo kune IPO, honzeri yezvakaitika kune ramangwana reUbuntu
Takatotaura nezvazvo shanduko Canonical irikuita munguva dzichangopfuura. Isu tatoona maratidziro aakaita Ubuntu Touch kuti apedze zviroto zvake zvekubatana, pamusoro pekugadzira Kubatana sezvataona kubatanidza Ubuntu mapurojekiti neBuntu GNOME uye kudzinga Unity Shell. Kugoverwa kweUbuntu kunovimbiswa, kana iyo kana kunhuhwirira kwayo hakuzonyangarika munguva pfupi iri kutevera, asi ichokwadi kuti havachazove vakafanana nekuda kwekurota kwavanova nako kwekukunda iro rinobudirira uye rakakosha chikamu cheIoT cheCanonical, mukuwedzera kukusimbisa kwekufarira mugore nezvimwe zvikamu zvakaita semotokari.
Uye zvese izvi imhaka yekuti Canonical muvambi Mark Shuttleworth ari kutora kufarira chikamu ichi uye arikutungamira kambani yake kwakanangana neIPO kugadzirira nzira yawakatomisa. IPO, kune avo vedu vasingazive izwi iri, ndicho chirevo cheInitial Public Offer, ndiko kuti, chipo cheveruzhinji umo zvikamu zvekambani yakazvimirira yeCanonical zvinotangwa kekutanga kuvanhu vese uye nguva iyoyo ndeye achiswedera.
IPO inowanzoitwa nemakambani madiki mu kutsvaga capital yekudyara uye kuwedzera ako mabhizinesi marongeroMune mamwe mazwi, izvo Canonical iri kutsvaga ndeyekuzvipa simba uye kuve kambani yakatokura ine huwandu hwakawanda hwezvirongwa zvayo. Ndinovimba kuti izvi zvinounzawo kuvandudzwa kwekugoverwa kweUbuntu, uko kwandinofunga kuti ndizvo zvinonyanya kubata vashandisi vekumba Saka nekukurumidza, munhu wese anotenga masheya achakwanisa kuve varidzi vechikamu chidiki chekambani uye ndinovimba kuti pamwe vachachiisa munzvimbo yakadai seSUSE kana Red Hat.
Asi chii usakanganisa kuzvipira kwako kuUbuntu, inova nyeredzi chigadzirwa chakavaisa kwavari, kunyangwe hazvo vaine mamwe mapurojekiti anonakidza ezvimwe zvikamu. Asi ini ndinofunga kuti kana iwe uchifunga nezveCanonical brand chinhu chekutanga chinouya mupfungwa ndiUbuntu.Ndinovimba kuti iyi IPO inounza kuvandudzwa kwenharaunda yese uye haizove kambani, sezvakaitika zvinosuwisa nevamwe, izvo zvinodzorwa uye inotungamirirwa nekufarira kwevatengesi vayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Canonical uye nzira yayo kune IPO, honzeri yezvakaitika kune ramangwana reUbuntu
Chii chinonzi IPO uye chii chinonzi IoT?
Pindura kuna miguel
Maia: zvigadziriso zviri kuuya zveiyi koloni yekuvaka simulator
Linux Mint 18.3 ichave iine Flatpak rutsigiro uye ichave yekupedzisira vhezheni ne KDE Edition